नेकपा सरकार र जनताको अपेक्षा – Chitwan Post
राजनीतिक पार्टी भनेको लोकतन्त्ररुपी गाडी चलाउने इन्जिन हो । नेतृत्व त्यसको चालक हो । देश चलाउने जिम्मा नेकपाको हातमा छ । कुनै पनि पार्टी निश्चित दर्शन, सिद्धान्त, नीति, विधि र नियमका आधारमा मात्र चल्न सक्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा एउटा व्यक्ति, पारिवार या निश्चित गुटले पार्टी तथा देश चलाउने परिपाटी बस्न थाल्यो भने त्यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था नभएर तानाशाही व्यवस्थामा पतन हुन्छ ।
आजको २१औँ शताब्दीमा त्यो पनि नेपालको अहिलेको विशिष्टतामा कुनै पनि किसिमको तानाशाही परिपाटी टिक्न र चल्न सक्दैन ।
कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त देशमा तमाम श्रमजीवी जनताको जीवनसँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको हुन्छ । श्रमजीवी जनताको जीवनमा खुसी र समृद्धि आउँदैन भने कम्युनिस्ट सरकार आफ्नो सिद्धान्तबाट विचलित भएको पुष्टि हुन्छ । पार्टी र देश चलाउने यो उसको पहिलो सर्त हो । एकपटक निर्वाचित भएपछि स्वेच्छाचारी तरिकाले चल्न पाउनुपर्छ भन्ने हो भने त्यो लोकतन्त्रविरोधी मान्यता हो । त्यसले एकातिर पार्टी अस्तव्यस्त बन्छ भने देशमा पनि सुव्यवस्था कायम हुन सक्दैन । पार्टी सञ्चालनको कुशलता परिचालन गर्नेले राज्य सञ्चालन पनि ठीक किसिमले परिचालन गर्न सक्छ । आफ्नै पार्टी चलाउन नजान्नेले सिंगो देश कसरी चलाउला ? प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ । लोकप्रिय नारा लगाउनु, घोषणा गर्नु, गलाभरि माला लगाएर लामा–लामा भाषण गरेरमात्र ठूलो कुरा हुने होइन, त्यसलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नुचाहिँ मह¤वपूर्ण छ ।
राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रिय सुरक्षा र समृद्धिका नाममा नियन्त्रणको राजनीति, आर्थिक अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचारमा आधारित आसेपासे पुँजीवादले प्रश्रय पाउन थालेको छ । यथार्थमा नेपालको राजनीति स्थायित्व र सुशासनको बाधक छैन, तर विधिको शासनको भने अभाव छ । सरकार वा प्रम जो कुनै परिवर्तन भए पनि विधिको शासन र नीति निर्माण प्रक्रियामा निरन्तरता रह्यो भने राज्यसञ्चालनमा स्थिरता हुन्छ । नेपालको राजनीतिक स्थायित्वको सबैभन्दा ठूलो बाधक राजनीतिक नियन्त्रणको खेल, समृद्धिको शपथको नाराले लुकाएको गलत परिभाषा र भ्रष्टाचारमा आधारित आसेपासे पुजीवाद हो । सुशासन र लोकतन्त्रको अभावमा नागरिक र राष्ट्रको हितमा प्रतिकूल असर परिरहेको छ । सरकार कसरी चलिरहेको छ र कुन राजनीतिक दिशातिर गइरहेको छ भन्नेबारे सबैले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ । दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारसँग जनताले पहिलो वर्षमै धेरै अपेक्षा गरेका थिए । तर, विद्युत् ऊर्जामा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र एसियामै सर्वाधिक प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतको राष्ट्र बनाउने सरकारको नारा त्यसवर्ष कागजमा मात्र सीमित भए । आयोजना निर्माणभन्दा पनि जलविद्युत्का अनुमति पत्र (लाइसेन्स) बेचबिखनमै सरकारले समय व्यतीत ग¥यो ।
समाजवाद र खुला बजारको भिन्नताका कारण देश पुँजीवाद उन्मुख भइरहेको छ । भ्रष्टाचार र आसेपासे पुँजीवादले समाजमा असमानता बढ्दैछ भने आर्थिक विकासको अवधारणामा आएको ता¤िवक परिवर्तनले आर्थिक अनुशासनहीनताको सम्भावना बढिरहेको छ । आसेपासे पुँजीवाद राजनीतिक अस्थिरताको एउटा प्रमुख स्रोत हो । प्रम ओलीका वरिपरि एउटा आसेपासे पुँजीवादमा रमाउने झुन्ड छ । तिनले आर्थिक लाभको हरेक क्षेत्र कब्जामा लिएर बसेका छन् । चाहे त्यो पर्यटन क्षेत्रमा होस् या शिक्षा, हाइड्रोपावर होस् या स्वास्थ्य, तिनीहरु सत्तासँगको निकटताका कारण राज्य र जनताको धन दोहन गर्न सफल भएका छन् । वैदेशिक लगानीको कुरा गर्ने गरिए पनि व्यवहारमा भ्रष्टाचार र आसेपासे पुँजीवादको जालो व्यापक बन्दै गइरहेको छ । भ्रष्टाचारमार्फत नै होस्, निजी क्षेत्र र नेताहरुलाई पोस्ने योजना बनेको हुन्छ । जस्तैः मेलम्ची खरबौँमा पनि नबन्ने लक्षण देखिँदैछ । नेपालमा हरेक सरकारको परिवर्तनसँगसँगै राजनीति अस्थिर बन्छ, किनभने नेताहरुको राज्यसञ्चालन देश र जनताका लागि नभएर भागबन्डा र लुटका लागि हुने गर्छ । एउटा सरकारले आयोजनाको ठेक्का एउटा कम्पनीलाई दिन्छ भने अर्को सरकार आउनेबित्तिकै कमिसनको चक्करमा अर्कोलाई ठेक्का दिन्छ ।
आमनागरिक यतिखेर राजनीतिक स्थायित्वसँग लोकतान्त्रिक संस्कार व्यवहारतः मूर्त भएको देख्न चाहन्छन् । शान्ति सुरक्षा होस्, विकास तीव्र बनोस्, सुशासन कायम होस्, शासकहरु विनम्र बनून्, सहमतिको बाटो नमेटियोस्, देशमा नै रोजगारी गर्न पाइयोस्, कामको खोजीमा विदेशमा पसिना चुहाउन नपरोस्, अकाल मृत्यु वरण नहोस्, राम्रो उपचार र शिक्षा स्वदेशमा नै हुन सकोस्, बालीनाली उत्पादनमा राज्य सहयोगी बनोस्, महँगीको भार खेप्न नपरोस् भन्ने आमनागरिकका चासोका विषय हुन् । शासनमा बस्नेले नागरिकलाई गाली नगरुन्, सबै पक्षसँग लोकतान्त्रिक मर्यादाअनुकूल आचरण होस् भन्ने कामना आमरुपमा पाइन्छ । तर, बिस्तारै आमनागरिकका यी साधारण समस्या पनि अधुरो हुँदै विफल हुने हुन् कि भन्ने संकेत देखिन थालेको छ ।
जनताका सपना मिच्ने कोशेढुंगा गएको वर्ष भएको छ भने यसवर्षले कसरी जनताका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ला ? हामी सबैको मनमा उठिरहेको प्रश्न हो यो । त्यतिमात्र होइन महँगी नियन्त्रण किन भएन ? शेयर बजारको दुर्गति किन र कसले गराइरहेको छ ? देशमा रोजगारीका गफ छन्, तर प्रतिदिन हजारौँको संख्यामा किन युवाहरु विदेश जानु परिरहेको छ ? निमुखा नागरिकलाई दिएका आश्वासन कहाँ हराए ? ०७४ माघमा नै वृद्धवृद्धालाई घरमा नै पुगेर पाँच हजार दिने घोषणा कसरी अहिले बेवारिसे हुँदैछ ? निर्मला हत्या प्रकरणको रहस्य किन खुल्न सकिरहेको छैन ? भूकम्पपीडितहरुको समस्या यथावत् रहनु र अब थप बारा र पर्सामा हुरीको सिकार भएकाहरुको समस्या किन समाधान भइरहेको छैन ? राष्ट्रियतामाथि धाबा बोल्ने काम किन बारम्बार भइरहेको छ ? जस्ता अनेक प्रश्न गएको वर्षले जन्माएको छ ।
राष्ट्रिय धन दुरूपयोगको हिसाबले डरलाग्दो दृश्य स्थानीय सरकारमा देखिन्छ । संघीयतापछि स्थानीय सरकार अधिकारसम्पन्न भएको छ र सँगै बजेटको आकार बढेको छ । महालेखा परीक्षकको हिसाब जाँचमा स्थानीय सरकार फजुल खर्चप्रेमी देखिएको छ । आमतहमै स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिमा सुविधा मोह, सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लंघन गरी अनुत्पादक खर्चमा केन्द्रित भएको तथ्य/तथ्याङ्क निरन्तर आइरहेको छ ।